Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कर्नाटकमा सरकार बनाउन कांग्रेस र भाजपाबीच रस्साकस्सी – Emountain TV
एजेन्सी, २ जेठ । भारतको कर्नाटकमा विधानसभा निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएपछि सरकार बनाउन समस्या भएको छ । चुनावमा पहिलो स्थान हासिल गरेको भारतीय जनता पार्टी र दोस्रो बनेको कांग्रेस आईबीच सरकार बनाउन दाउपेच चलिरहेको छ ।
भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा सम्पन्न बिधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले १ सय ४ सीट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, सरकार बनाउन बहुमत जुटाउन भने असफल रह्यो ।
दोस्रो बनेको कांग्रेस पार्टीले ७८ सीट र जेडीएस गठबन्धनले ३८ सीट प्राप्त गरेको छ । सरकार बनाउनको लागि १ सय १२ सीट चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भाजपालाई ८ सीट अपुग भएको छ ।
काँग्रेसले जेडिएसको समर्थन लिएर सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । काँग्रेस र जेडिएस मिल्दा १ सय १६ सिट अर्थात सरकार बनाउन बहुमत पुग्नेछ । यता, ठूलो दल भाजपाले पनि सरकार बनाउने दाबी गरिरहेको छ ।
विधान सभाका २ सय २४ सिटमध्ये २ सय २२ सिटमा शनिवार निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कर्नाटकका गभर्नर भाजपाका खास ब्यक्ति र एउटा राज्यमा ९ बर्षसम्म अर्थमन्त्री भइ काम गरेकाले उनले भाजपाकै सरकार बनाउन सघाउने सम्भावना छ ।
ठूलो दलको हैसियतमा भाजपालाई सरकार बनाउनका लागि गभर्नरले आव्हान गर्ने सम्भावना रहेको छ । गभर्नरले भाजपालाई सरकार बनाउन आमन्त्रणसहित बहुमत सिद्ध गर्न केही साथ दिन सक्ने अवस्थाले भाजपाले आफनो सरकार बनाउन कसरत गर्दै आएको छ ।
जेडिएसका नेता एचडी कुमार स्वामी दुई विधानसभा सिटमा बिजयी भएकाले बहुमत सिद्ध गर्न हुने मतदान अघि उनले पनि एक सिट खाली गर्दा भाजपालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।